Maitiro ekutarisana nevaviri dambudziko rakakonzerwa nekuuya kwemwana wavo wekutanga | Bezzia
Maria Jose Roldan | 12/01/2022 22:14 | Hukama
Kuuya kwemwana nguva dzose kunofungidzira kuchinja kukuru kwehupenyu hwevaviri. Pasina kuziva kubata nemazvo, zvinogoneka kuti hwaro hwehukama hunotanga kutsemuka nenzira ine njodzi. Kuberekwa kwemwana pasina mubvunzo muedzo we litmus kuvabereki.
Kuziva kugadzirisa mamiriro matsva kunogona kubatsira kusimbisa hukama uye kukwanisa kunyatsonakidzwa nechokwadi chekuva nemwana. Munyaya inotevera tichakuratidza zvikonzero kana zvikonzero nei vaviri vachigona kutera mwana wavo wokutanga asati asvika uye zvokuita kuzvigadzirisa.
1 Dambudziko revakaroorana mushure mekuberekwa kwemwana wavo wekutanga
2 Zvikonzero zvedambudziko muvaviri nekuda kwekuuya kwemwana
3 Chii chaunofanira kuita kuti udzivise nguva dzedambudziko mushure mekuberekwa kwemwana wekutanga
Dambudziko revakaroorana mushure mekuberekwa kwemwana wavo wekutanga
Vaviri vakaroorana vanotarisana nedambudziko ringabvira nenzira yakasiyana. Mune zvimwe zviitiko, kurwa kana kunyomba kunoitika nguva dzose, nepo mune zvimwe zviitiko, kureba kunogadzirwa pamwero wepfungwa. Iva sezvazvingaite, izvi hazvina kunaka zvachose kuhukama, zvichikonzera kuderera kwakakosha mazviri.
Kana zvinhu zvikasafamba zvakanaka. Zvingangodaro kuti kusagadzikana kwambotaurwa kunozopedzisira kwakuvadza mhuri yose. Kuti udzivise izvi, zvakakosha kuwana zvikonzero zvinokonzera kusagadzikana kwakadaro uye kuita kuitira kuti nucleus yemhuri isakuvadzwa chero nguva.
Zvikonzero zvedambudziko muvaviri nekuda kwekuuya kwemwana
Chekutanga chezvisakiso chinowanzokonzerwa nehunhu hwevabereki vese. Kana ari amai, zvinofanira kucherechedzwa kuti muviri wavo wakaita chinjo dzinokosha pamwe chete nechimiro chavo chendangariro. Panyaya yababa mutoro wacho mukuru zvikuru, zvikurukuru kana toreva nezvokutarisira mwana muduku.
Chimwe chikonzero chedambudziko chinogona kunge chiri nekuda kwekuchinja kukuru kwemaitiro ezuva nezuva. Kuva nemwana kunoreva kuchinja hupenyu hwako zvachose uye kuisa pfungwa pakugara zvakanaka kwemwana. Vabereki havana nguva yavo pachavo uye kuti vakwanise kuzvibvisa.
Chimwe chezvikonzero zvinowanzoitika nei vakaroorana vachipopotedzana pavanenge vaine mwana wavo wekutanga imhaka yekuparadzaniswa kwemabasa epamba. Nguva zhinji hapana kuenzana kana zvasvika pakugovanisa mabasa akasiyana mukati memba uye Izvi zvinopera mukukonana kwakasimba.
Hapana mubvunzo kuti kutarisira mwana kunova chinhu chinonyanya kukosha pakati pevakaroorana. Izvi zvinoreva kuti nguva yevaviri ava yakadzikira zvakanyanya. Nguva dzekunakidzwa kwevaviri ava dzinoda kupera zvachose uye izvi zvinokanganisa ramangwana rakanaka rehukama.
Chii chaunofanira kuita kuti udzivise nguva dzedambudziko mushure mekuberekwa kwemwana wekutanga
Zvakanaka kuti vabereki vachauya vazvizivise ivo vasati vaberekwa, zvese zvinouya nekuzvara mwana.
Zvakanaka kugara pasi, kutaura uye kutanga kuronga mabasa akasiyana-siyana auchazofanira kubata nawo kana mwana wako aberekwa. Iyo inzira inoshanda kwazvo yekudzivirira kusawirirana uye kurwa.
Zvakakosha kuti mubereki mumwe nomumwe ave nenguva yekusununguka, kukwanisa kubvisa maminetsi mashoma kubva pamutoro wekuchengeta mwana.
Kana zvakakodzera, zvakanaka kukumbira shamwari kana mhuri rubatsiro. Dzimwe nguva rubatsiro rwakadaro runokosha kuti udzivise mamiriro ezvinhu ekunetseka kana kufunganya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Psychology uye vaviri » Hukama » Vaviri vanorarama sei nedambudziko rakakonzerwa nokusvika kwomwana wavo wokutanga